Trích dẫn hay nhất trong sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh | Anybook.vn - Anybook
Trích dẫn hay nhất trong sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh | Anybook.vn
“Toy ny zaridaina ny haisoratra, samy mifidy asa ho an’ny tenany ny mpanoratra, misy ny mamboly raozy, misy tia misintona ahi-dratsy, misy mihaza kankana. Manoratra ho an’ny zatovo aho, mihaino eritreritra maro nozarain’ny mpamaky amin’izao vanim-potoana izao, tsapako fa mila soatoavina lalina ao amin’ny fanahiny izy ireo, amin’ny zavatra madio. Ny fiainana ankehitriny miaraka amin’ny fahasahiranana dia nandroaka ny zava-drehetra momba ny tantaram-pitiavana, manoratra aho mba hanonerana ny fahazazan’ny tanora mpamaky, satria indray mandeha ianao nilaza tamiko fa namaky ny bokiko aho dia nahatsapa fa nahita ampahany tamin’ny fahazazako aho. tsy hita sy very,” hoy ny mpanoratra Nguyen Nhat Anh.
Ny mpanoratra Nguyen Nhat Anh dia fantatra amin’ny ankamaroan’ny tantara lava be mahomby indrindra ho an’ny fahazazana sy ny fahatanorana. Miantehitra amin’ny fahatsiarovana fahazaza izay nolazain’i Nguyen Nhat Anh hoe “tsy lany mihitsy” ao an-tsain’ny mpanoratra, miaraka amin’ny traikefa lava amin’ny fanoratana lohahevitra ho an’ny zatovo, ny mpanoratra dia namoaka asa maherin’ny 100. Ny sanganasany dia nanana fahatsapana manokana foana ary nahasarika ny fo. amin’ny taranaka maro mpamaky vietnamiana toa an’i Mat Biec, Ha Do, Omeo tapakila ho amin’ny fahazazana aho, Indray mandeha nisy tantaram-pitiavana, Manaova namana amin’ny lanitra, Beto aho, Mahita voninkazo mavo eo amin’ny bozaka maitso, Ny Girl From Omaly,…Maro amin’ireo tantara ireo no namboarina ho sarimihetsika ary mahasarika mpamaky tia ny fomba fanoratana an’i Nguyen Nhat Anh.
Raha mpankafy mafy ianao, tiavo ny tantaran’i Nguyen Nhat Anh, tsy azo atao tsinontsinoavina ity lahatsoratra eto ambany ity. AnyBooks.vn dia synthesize Ny teny nalaina sy teny tsara indrindra ao amin’ny bokin’ny mpanoratra Nguyen Nhat Anh.
Famintinana ny teny sy teny tsara indrindra ao amin’ny bokin’ny mpanoratra Nguyen Nhat Anh
1. Niova tokoa ny fiainana. Misy fiovana lalina, fiovana mahafaty izay tsy mora fantatra raha vao jerena. (Nalaina avy amin’ny boky Blue Eyes)
2. Efa lehibe aho ka nahatakatra fa miova isan-taona izao tontolo izao ary tsy mitovy ny fon’ny olona. Ny fahazazana dia tsy manana afa-tsy lalana iray hiarahana. Rehefa lehibe eo anoloantsika isika dia maro ny lalana eo amin’ny fiainana, maro ny anjara, maro ny fihodinana, ahoana no tsy hanadinoan’ny olona azy. (Nalaina avy amin’ny boky Blue Eyes)
3. Hafahafa be indraindray ity universe ity, rehefa miezaka manafina amin’ny fahatsiarovana iray na olona iray isika vao mahita sombiny amin’izany fahatsiarovana izany, miparitaka sy miparitaka eny rehetra eny. (Nalaina avy amin’ny boky Blue Eyes)
4. Nandalo ny ala Sim aho, dia tsy nijanona, na dia nitempo foana aza ny foko. Matahotra ny fahatsiarovana mitazona ahy aho. Matahotra ny hipetraka irery eo afovoan’ny alan’i Sim aho, ho feno ravinkazo mianjera ny foko… (Ampahany avy amin’ny boky Blue Eyes)
5. Hoy i Bebe fa misy zavatra roa tsy azo tsinontsinoavina eo amin’ny fiainana. Ireo no fiara farany sy ireo olona tena tia antsika. (Nalaina avy amin’ny boky Blue Eyes)
6. Rehefa mitombo ny olona dia mitombo koa ny hafaliany sy ny alahelony. Ao amin’ny nofiko dia tsy misy valala, dragonfly toy ny tamin’ny fahazazako. Nisy oram-baratra sy oram-baratra nanaraka ny alina nitsoka ny tafo ny rivotra. Eny, na ny nofy aza dia mitombo ao. (Fehintsoratra avy amin’ny boky Tanora hazo akondro manao kiraro maitso)
7. Maro ny olona matahotra ny alahelo. Fa tsy matahotra aho fa matahotra ny fiainana tsy mampalahelo, tsy faly amin’ny ankapobeny, mankaleo. Mila alahelo koa isika indraindray raha te ho mpinamana, indrindra rehefa lasa foana tampoka ny fiainana ka manenika antsika isan-minitra ny fahatsapana ho manirery. (Fehintsoratra avy amin’ny boky Omeo tapakila ho an’ny fahazazana)
8. Malahelo ny andron’ny fahazazako aho, izay ny sarotra indrindra atao dia ny manapa-kevitra hoe inona no lalao holalaovina ankehitriny? (Fehintsoratra avy amin’ny boky Omeo tapakila ho an’ny fahazazana)
9. Raha ny marina, ny sata dia mila bokotra ihany koa, fa rehefa adino ny mametraka azy dia matetika tsy mahatsapa ny fahatsapana ho reraka. Olon-dehibe maro no mihevitra ny fahadiovan’ny akanjony mihoatra noho ny fitondran-tenany. Satria mora tsikaritry ny hafa ny akanjo misoroka ary sarotra fantarina ny toetra misoroka ary rehefa hita dia misy fialan-tsiny tsy tambo isaina. (Fehintsoratra avy amin’ny boky Omeo tapakila ho an’ny fahazazana)
10. Marina daholo izay ampianarin’ny olon-dehibe, hitan’ny ankizy izany. Saingy mbola manana faniriana tsy hita maso izy ireo hanova ny zava-misy. (Fehintsoratra avy amin’ny boky Omeo tapakila ho an’ny fahazazana)
11. Ny ankizy dia mahita ny zava-drehetra any amin’ny toerana tsy misy na inona na inona, ary ny olon-dehibe dia tsy mahita na inona na inona amin’ny zava-drehetra. (Fehintsoratra avy amin’ny boky Omeo tapakila ho an’ny fahazazana)
12. Mba hiainana tsara kokoa, indraindray isika dia mila mianatra ny ho zaza vao mianatra ny ho olon-dehibe. (Fehintsoratra avy amin’ny boky Omeo tapakila ho an’ny fahazazana)
13. Nahita tanora maro aho nanomana ny fiainany: 22 taona nahavita fianarana ambony, 25 taona manambady, 27 taona nanangana orinasa, 30 taona niteraka ny zanany voalohany, sy ny sisa. ! Fa raha vao voalamina akaiky sy ara-tsiansa ny fiainan’ny olona iray, raha mandeha araka ny vinavina ny zava-drehetra, ho tototry ny fihetseham-po ve ianao? (Fehintsoratra avy amin’ny boky Omeo tapakila ho an’ny fahazazana)
READ Review Sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài | Anybook.vn
14. Ao am-pianarana dia mipetraka eo amin’ny latabatra farany foana aho. Ny mipetraka eo amin’ny latabatra farany dia afaka mifampiresaka, mifamaly, manindrona na milalao ny karazana asa ratsy rehetra tsy misy tahotra sao ho hitan’ny mpampianatra, fa ny tena mahasarika amin’io toerana maizina io dia ny hoe zara raha antsoina amin’ny valin-teny. (Fehintsoratra avy amin’ny boky Omeo tapakila ho an’ny fahazazana)
15. Mba hahatongavana any amin’ny lemaka milamina, ny olona indraindray dia tsy maintsy mananika ny tendrombohitra avo ao am-pony. (Sombiny avy amin’ny tantaram-pitiavana taloha)
16. Ny fisakaizana no tany mety indrindra ho an’ny fitiavana mba hamafazana ny voany. Indray andro, lasa tery loatra ny lobaka finamanana, mila lobaka hafa io tovovavy io. (Sombiny avy amin’ny tantaram-pitiavana taloha)
17. Tsy rano mikoriana ny fitiavana, tsy lohasaha ny fanambadiana (Fehintsoratra avy amin’ilay boky hoe Once There Was A Love Story)
18. Ny tanjona faratampony amin’ny fiainana dia ny hahita fahasambarana, samy manao izany, satria tsy lovia nomanina ho an’ny tsirairay ny fahasambarana. (Sombiny avy amin’ny tantaram-pitiavana taloha)
19. Satria fantatro ve fa ho faty rahampitso aho nefa tsy te hanao na inona na inona anio! (Sombiny avy amin’ny tantaram-pitiavana taloha)
20. Ny fitadiavana fitiavana dia sahisahy tahaka ny fitadiavana harena. Tsy azo fantarina mialoha na baoritra volamena na vilia vaky fotsiny no hohadiana. (Sombiny avy amin’ny tantaram-pitiavana taloha)
21. Ny fitiavana dia tsy fanehoana fankasitrahana, na asa fiantrana aza. Tsy tonga eto amintsika amin’ny seza misy kodiarana, amin’ny tanana sy tongotra mipetaka, ny miantso famindram-po. (Sombiny avy amin’ny tantaram-pitiavana taloha)
22. Amin’ny fo feno fitiavana, ny fiainana dia tsy manana fahafahana ho tonga enta-mavesatra. (Nalaina tao amin’ilay boky hoe Manaova namana amin’ny lanitra)
23. Misy rahona eny amin’ny lanitra amin’ny endriny rehetra, misy vorona manidina, indraindray misy lolo maro loko mihodinkodina manodidina ny varavarankely. Toa nopotserina teo amin’ny olona tsirairay misy tasy mangatsiaka ny rotsak’orana. Toy ny olona mampiasa borosy atsoboka amin’ny orana mba hihomehezana..
24. Mahita vintana tsara foana amin’ny toe-javatra mampahory, mifalia mandrakariva amin’ny anjara tsy mahafaly, karakarao tsara foana ny fiainana, na dia tsy natao ho tsara foana aza ny fiainana. Ireo toetra ireo angamba no tsy hita afa-tsy ao amin’i Teo, ilay zaza izay mihevitra ny fisakaizana amin’ny lanitra avo sy malalaka ho fifaliana lehibe. Lehibe lavitra noho ny fahavoazako manokana. (Nalaina tao amin’ilay boky hoe Manaova namana amin’ny lanitra)
25. Toa voatsoboka amin’ny fitiavana foana ny fon’i Teo. Mahita fahafahana mamela heloka foana izy, ka milamina foana ny fanahiny. (Nalaina tao amin’ilay boky hoe Manaova namana amin’ny lanitra)
READ [Review Sách] “Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh”: Đánh Thức Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại Trong Bạn | Anybook.vn
26. Tamin’ny voalohany nahazo alahelo aho, dia takatro fa tapitra ny fahazazako. (Fehintsoratra avy amin’ny boky Red Summer)
27. Ny fahasambarana tafahoatra dia fandriky ny fiainana indraindray. (Fehintsoratra avy amin’ny boky Misy saka roa mipetraka eo am-baravarankely)
28. Ny zava-dehibe indrindra amin’ny fitiavana dia tsy ny fahatakarana fa ny fahatsapana. Ny fihetseham-po fa tsy ny fanadihadiana ara-pihetseham-po no mahatonga ny fitiavana. (Fehintsoratra avy amin’ny boky Misy saka roa mipetraka eo am-baravarankely)
29. Ny be taona no mihavitsy miteny. Mieritreritra bebe kokoa izy ireo. (Nalaina tao amin’ilay boky hoe I Am Concrete )
30. Indraindray ianao tia olona iray satria fotsiny hoe tena tia anao ilay olona. (Nalaina tao amin’ilay boky hoe I Am Concrete )
31. Fomba fihainoana koa ny fangorahana. Manana sofina ny fo, minoa izany? (Nalaina tao amin’ilay boky hoe I Am Concrete )
32. Fantatrao, indraindray ny anarana dia omen’ny ray aman-dreninao kisendrasendra, fa ny fomba fiainanao no nanadio tsy tapaka ny anaranao nandritra ny taona maro, nanampy azy hanindrona. (Nalaina tao amin’ilay boky hoe I Am Concrete )
33. Zavatra tsy dia misy dikany loatra ny tononkalo nefa tena masina. Mino aho izao. Tahaka ny inoako fa eto amin’izao tontolo izao dia misy zavatra masina faran’izay tsy misy dikany. (Nalaina tao amin’ilay boky hoe I Am Concrete )
34. Raha misy olona omena fiheverana manokana amin’ny hafa, dia ho tonga tsilo eo imason’ny hafa izy. (Nalaina tao amin’ny boky hoe I Am Concrete)
35. Rehefa tsy azonao izay tadiavinao, dia mety hahatsiaro ho voailika amin’ny fahafahanao koa ianao. (Nalaina tao amin’ilay boky hoe I Am Concrete )
36. Raha mandefa hafatra tsara avy amin’ny fanahy izy, dia ho maimbo kokoa ny vava noho ny fampitana ny hafatra avy amin’ny sakafo amin’ny vavony. (Nalaina tao amin’ilay boky hoe I Am Concrete )
37. Rehefa manova ny fomba fijerinao ianao, dia ho hitanao fa miseho amin’ny hazavana hafa ny tontolo iainanao, ary angamba noho izany dia ho hafa koa ny fiheveranao an’izao tontolo izao. (Nalaina tao amin’ny boky hoe I Am Concrete)
38. Tsy mahay manangana alahelo ny ankizy raha mbola olon-dehibe. (Sombiny avy amin’ny boky Hitako voninkazo mavo eo amin’ny bozaka maitso)
39. Mitomany toy ny ranonorana ny olona. Rehefa lany ny rano vao tsy hisy intsony ny orana ary tsy hitomany intsony isika. (Sombiny avy amin’ny boky Hitako voninkazo mavo eo amin’ny bozaka maitso)
Anybooks.vn – Fantsona fampahafantarana hampidirana boky, famerenana boky, fizarana boky tsara hovakiana ho an’ny mpamaky.
Previous: “Nhỏ Dãi” Loạt Hình Ảnh Girl Học Sinh Cấp 3 Dễ Thương & Kute Nhất | Anybook.vn
Next: +566 Caption Hay Về Trà Sữa ngọt ngào và yêu thương | Anybook.vn